Takelaby Wiki Wiki ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Honolulu
1 Fiasany ara-teknika
1.2 Fitantanana ny fanovàna
1.3 Famantarana ny mpitsidika
2 Fiasany ho an'ny olombelona
5 Wikis maro samihafa
5.1 Wiki amin'ny teny malagasy sy momba an'i Madagasikara
5.2 Rakibolana Wiki
5.3 Rakipahalalana wiki
5.4 Annuaires wiki
5.5 sehatra wiki hafa
5.6 Rindrankajy wiki (na motera wiki)
5.7 Fiaraha-monin'ny mpampiasa wiki
5.8 Sehatra ahitana fampahalalana momba ny wiki
5.8.1 Sehatra anglisy
Ny mampiavaka ny wiki amin'ny fitaovana fitantanana votoatin-tsehatra hafa dia mitovy ny fahafahan'ny olona tsirairay manana alàlana amin'izany hanova ny votoatin'ny pejy, ary tsy voafetra ny fanovàna ataony amin'izany kanefa tsy miteraka lesoka eo amin'ny sehatra amin'ny ankapobeny : afaka manitsy tsipelina iray diso na faingo tokana monja izy nefa koa afaka mamafa ny votoatin'ny pejy iray manontolo. Ao anatin'ny wiki dia namoraina ny famoronana pejy sy ny fanaovana rohy. Ny lasitra itoeran'ny votoatin'ny pejy izay misy ny fampahalalana ankapobeny sy mombamomba ny sehatra ihany no tsy afaka ovaina.
Ny mpivoivoy tranonkala mahazatra (navigateur) ihany no fitaovana ampiasaina hijerena sy hanovana ny lahatsoratra. Misy endrika roa no ahafahana mahita ny pejy : mijery fotsiny na ny fahafahana manova ny votoatiny. Amin'ny fanovàna ny pejy, dia miseho ao anaty fisy (formulaire) ny lahatsoratra. Miampy tetika fanoratra (syntaxe) vitsivitsy izany, izay antsoina koa hoe wikitext, ahafahana mamboatra ny endriky ny lahatsoratra, manisy rohy, manampy sary. Raha oharina amin'ny fango HTML dia mora ianarana kokoa io fomba iray io.
Fitantanana ny fanovànaHanova
Tehirizin'ny wiki ny mombamomba ny fanovàna rehetra (ny votoatin'ny lahatsoratra, ny daty nanovàna azy, ny olona nanova azy). Azo atao araka izany ny manaraka ny fivoaran'ny pejy anankiray, na ny manafoana fanovana anankiray ka mamerina ny lahatsoratra amin'ny endriny teo aloha. Azo arahi-maso ihany koa ny fandraisan'anjaran'ny mpitsidika. Farany dia aza atao koa ny manaraka indray mijery sy amin'ny fotoana rehetra ny fiainan'ny sehatra iray manontolo. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia tehirizina ao anaty banky angona avokoa amin'ny ankapobeny.
Tsy ny pejy rehetra kosa anefa mazava ho azy ny azo ovaina, ary anisan'ny tsy azo ovaina ny pejy ahitana ireo fanaraha-maso ireo. Misy koa pejy hafa natokana ho an'ny mpitantana ihany, ka tsy afaka ovàna, toy ny pejy handinihana ny rohy, ny pejy mampifandray amin'ny système (fidirana, mombamomba ny mpitsidika, fanovàana anarana pejy, fandefasana rakitra).
Famantarana ny mpitsidikaHanova
Tsy voatery hoe afaka ovain'ny daholobe daholo akory ny wiki rehetra ; indraindray mety hotakiany ny fisoratana anaran'ny mpitsidika. Ary ho an'ny wiki misokatra ho an'ny daholobe aza dia misy teknika ampiasaina hiadiana amin'ny fanovana tsy irina.
Rehefa avelan'ny wiki iray manova ny votoatin'ny pejy ao anatiny ny mpikambana tsy misoratra anarana, dia ny adiresy IP-n'ilay mpitsidika no amantarany azy. Na izany na tsy izany dia azo atao ny manokatra kaonty sy miditra amin'ny alàlan'ny solonanarana sy tenimiafina.
Fiasany ho an'ny olombelonaHanova
Ny wiki iray misokatra ho an'ny daholobe dia karakarain'ny fiaraha-moni-mpitsidika na fikambanan'ny mpampiasa azy mandavanandro, ary manatratra tanjona tokana ireo olona ireo. Raha vao misy fampahalalana miova, dia avy manara-maso an'izay ny mpandray anjara mavitrika liana amin'ny pejy novaina, ary manitsy ny diso na manampy fampahalalàna raha ilaina. Araka izany, vetivety ihany dia hita sy voafafa ny fisomparana maro izay mety hisy hanao. Ankoatra an'izay dia misy antanantohatra ihany koa ny fahefana ananan'ny mpitsidika. Misy mpitsidika sasany manam-pahefana hamafa na hanidy pejy iray mba tsy ho azo ovaina intsony, na koa manakana ireo mpikambana tsy mitondra soa ho an'ny tetikasa. Amin'ny ankapobeny dia mora sy vetivety kokoa ny manafoana ny fisomparana anankiray noho ny herim-po sy fotoana lany nanaovana azy.
Ny fahombiazan'i Wikipedia dia maneho fa ny fiaraha-miasan'ny olona maromaro resy lahatra amin'ny tanjona iray dia ampy hahavitana sehatra wiki iray lehibe, tsara kalitao ary be mpitsidika. Nefa ireo sehatra wiki misokatra ho an'ny daholobe fa tsy ampy fanaraha-maso kosa dia vetivety dia lasibatry ny fisomparana sy ny spam.
Jérôme Delacroix, Les wikis. Espaces de l'intelligence collective, M2 Editions, Paris, 2005
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : wiki
les wikis ont dix ans -- Jery todika momba ny taona 2005, nosoratan'ny mpampiasa wiki maromaro.
Wikis maro samihafaHanova
Wiki amin'ny teny malagasy sy momba an'i MadagasikaraHanova
Ny nahazoana ity lisitra ity dia nokarohina tamin'ny fitaovana fikarohana sehatra izay sehatra ahitana ny teny hoe wiki, malagasy sy amin'izany
teny sehatra rindrankajy wiki
Tetikasa fanorona (Torolàlana amin'ny famolavolana rindrankajin' ilay lalaon-tsaina malagasy malaza atao hoe fanorona) Wikini
Wiki infogasy Archived Desambra 2, 2020 at the Wayback Machine: Sehatra wiki ahitana lahatsoratra sy dikan-teny momba ny informatika DokuWiki
openformats.org Famporisihina ny fampiasàna format malalaka WikkaWiki
wiki.serasera.org Archived Martsa 6, 2016 at the Wayback Machine: Wikianja, wiki ho ampiasain'ny mpikambana ao amin'ny serasera.org MediaWiki
hatsiklo.pedia.ws : Uncyclopedia amin'ny teny malagasy. MediaWiki
((fr)) WikiThema (glossaires thématiques et humoristiques)
((fr)) Enciclopedia Libre (rakipahalalana espaniôla)
Jurispedia (rakipahalalana momba ny fitsarana)
((fr)) Ekopedia (tetikasa rakipahalalana mikirakira ny teknika amin'ny fiainana)
((fr)) WikiF1 (rakipahalalana natokana ho an'ny spaoro fiarakodioa sy ny familiana Formule 1)
((fr)) WikiKto Archived Oktobra 17, 2017 at the Wayback Machine (rakipahalalana katôlika malalaka)
((fr)) Wiki Gamers Archived Novambra 12, 2008 at the Wayback Machine (rakipahalalana momba ny lalao stratejia)
((en)) Wowwiki (rakipahalalana momba ny MMORPG World of Warcraft)
((fr)) Wikiberal (rakipahalalana liberal)
((fr)) GeneaWiki rakipahalalana momba ny firazanana (généalogie)
((fr)) Kestudy : lesona maimaim-poana amin'ny taranja rehetra
WikiIndex -- wiki-n'ny wiki. Tarihin'i Mark Dilley, tetikasa iray hamoronana annuaire-n'ny wiki eran-tany, sokajiana araka ny toetra maro (tenim-pirenena, karazana, votoatiny, ...).
Web-Québec Archived Febroary 24, 2006 at the Wayback Machine (répertoire Web malalaka)
sehatra wiki hafaHanova
Wikinsider Archived Febroary 6, 2019 at the Wayback Machine mpitari-dàlana eo amin'ny sehatry ny hôtely, trano fisakafoanana, bar, club, fivarotana
Wikispecies (amin'ny tenim-pirenena maro)
Wikibooks (amin'ny tenim-pirenena maro)
((fr)) Wikituto.org (tutoriaux)
Wikipen Archived Jiona 15, 2006 at the Wayback Machine (amin'ny tenim-pirenena maro) Atrikasa fanoratana ifarimbonana sy malalaka
Rindrankajy wiki (na motera wiki)Hanova
Araka ny anarany, ny rindrankajy wiki dia rindrankajy ahafahana manao sehatra amin'ny tranonkala mifototra amin'ny wiki.
Lahatsoratra ahitana antsipirihany : rindrankajy Wiki.
Fiaraha-monin'ny mpampiasa wikiHanova
CraoWiki (fikambanana lehibe an'ny mpampiasa wiki miteny frantsay)
CommunityWiki Archived Aprily 5, 2004 at the Wayback Machine (wiki miresaka momba ny lohahevitra mahakasika ny fivondronan'ny mpampiasa wiki na eo anivon'ny tranonkala na any ivelany : fitantanana, fampianarana, fifandirana, fanelanelanana, kabary ara-teknika, sns.)
Meatball Wiki amin'ny teny frantsay
Sehatra ahitana fampahalalana momba ny wikiHanova
PointWiki -- blaogy miteny frantsay ifarimbonana natokana ho an'ny vaovao momba ny wiki
((en)) Wikimatrix : sehatra ahitana fampitahana rindrankajy wiki (fampitahana rindrankajy wiki mihotra ny 20)
((en)) Wiki (wiki voalohany indrindra)
((en)) MeatballWiki (iray amin'ireo wiki lehibe indrindra)
((en)) Codepedia (wiki natokana ho an'ny programmeur)
((en)) Annuaire dmoz.org
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=1036575"
Dernière modification le 24 Aogositra 2021, à 12:49
Voaova farany tamin'ny 24 Aogositra 2021 amin'ny 12:49 ity pejy ity.